Munyori: Milton Shupe, Gauges naScott Thomas, Magwaro naAndré Folkers, Urs Burkhardt, Damian Radice, Manfred [Mani] D.Saliger, Inzwi reNigel Richards, pontoons yakarongedzwa naBill Ortis, Water Effect uye inotanga kugadzirisa kurongwa neRoma Stoviak
Updated musi 16 / 02 / 2018: Nhamba itsva FSX yemu 3D yemuenzaniso uye 100% yakabatana Prepar3D v4 +. Kuwedzerwa kwezviviri zviviri zvitsva, bump uye mapepa mapu mavara, zvinyorwa zvakakwana. Hapana jeri 2d iyi add-on inofamba kubva kuVC chete.
Ikoji iyi inopa miviri miviri (mutoro uye vatakure), tsika dzepakisi uye majiji, zvakasikwa uye zvoita zvechokwadi, kufamba kwemufambiro pedyo neichokwadi, kusanganisira vana vana.
Chimwe chezvinhu chaizvo zvechokwadi Freeware seaplanes for your flight simulators. Mutevedzeri wakanaka nekambodha yakakwana uye injini inonzwika yehutano hwakanaka iyo inokumbidzidza zvachose mukuenzanisa.